धनुषामा एक अघोरी बाबा द्वारा बञ्चरो प्रहार गरी एक वृद्धको हत्या प्रयास
जनकपुर- धनुषामा एक अघोरी बाबाको बञ्चरो प्रहारबाट एक वृद्ध गम्भिर घाईते भएका छन् ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नं. २ नक्टाझिज बस्ने ६० वर्षीय राजकुमार महतो माथि अघोरी बाबा भन्ने एकजनाले बञ्चरो प्रहार गरी फरार भएका छन् ।
महतोको घाँटीमा ज्यानै लिनेगरी बञ्चरो प्रहार गरी अघोरी बाबा फरार भएका छन् ।
मिथिला नगरपालिका वडा नं.१ लक्ष्मीनिवासमा महतोको खेतमा चोराएर बाँस काटि रहेको अघोरी बाबालाई बाँस किन काटेको सोधीखोजी गर्दा बाबाले महतोको घाँटीमा हातमा भएको बञ्चरो प्रहार गरेका थिए ।
बञ्चरोले घाँटी काटिएर घाइते भएका महतोको स्थानीयस्तरमा उपचार गरिएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । घाइते महतोको घाँटीमा दर्जन भन्दा बढी टाकाँ लगाएको महतोका छोरो ओमप्रकाश महतोले बताउनुभयो ।
यता घटना लगतै स्थानीयबासीहरु र ईलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका टोली घटनास्थलमा पुगेपनि बाबा फरार भएका छन् ।
बञ्चरो प्रहार गर्ने बाबाको खोजी कार्य तीव पारिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरले जनाएको छ । धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ८ दिगम्वरपुर स्थायी घरका भएका र आफुलाई अघोरी बाबा भने ४० वर्षीय तुलसी नाम भएको बाबा महिना भन्दा बढी समयदेखि मिथिला नगरपालिका वडा नं. १ लक्ष्मीनीवास स्थित बसही खोलाको किनारमा त्रिपाल टागेर कुकुर र बाँदर सँगै बस्दै आएको स्थानीयले बताएका छन् ।
लक्ष्मीनिवासकै नातामा पर्ने केही व्यक्तिहरुको आडमा खोला किनारमा बसेको उक्त ढोंगी अघोरी बाबालाई बचाउन खोजिएको पीडित परिवारजनको दावी छ । खेतमा चोराएर बाँस काट्दै गरेको फेला पारेपछि सोधखोज गर्दा उल्टै उक्त बाबाले महतोलाई घाँटी काटेर हत्या गर्न खोजेको स्थानीय शिवकुमार सिंहले बताउनुभयो । अघोरी बाबा र उसलाई संरक्षण गर्ने केही व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कडा कारवाहीको माग स्थानीहरुले गरेका छन् ।
दिगम्वरपुरका स्थानीयहरुका अनुसार मानसिक सन्तुलन समेत ठीक नभएका तुलसी नामक ढोंगी बाबा बनेर यस्ता कयौं अपराध समेत गरेका छन् । गाँजा, भांग, लागुऔषध समेत सेवन गर्दै आएको उक्त ढोंगी बाबा बाँदर र कुकुर सँगै लिएर बस्ने खोला किनारमा बस्ने गरेको स्थानीय रामचन्द्र महतोले जानकारी दिनुभयो ।
Tags: बाबा द्वारा बञ्चरो प्रहार गरी हत्या प्रयास